ပန်ဒိုရာ: ပြည်တော်ပြန် တူမကလေးနှင့် နေအိမ်ဝန်းကျင် မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၃.၇.၂၀၁၁) ညနေ ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ် စက်ရပ်သတင်းအကျဉ်း
ပြည်တော်ပြန် တူမကလေးနှင့် နေအိမ်ဝန်းကျင် မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၃.၇.၂၀၁၁) ညနေ ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ် စက်ရပ်သတင်းအကျဉ်း
drawing icn2 (ink and wash painting)
အိမ်ရှေ့တွင် ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံ ၄င်းနောက်တွင် ရေမြောင်းကြီး၊ မြောင်းနောက်ဖက်တွင် ၈ မိနစ် (သို့) ၁၀ မိနစ်လျင် တစ်ကြိမ် ခုတ်မောင်းလျက်ရှိသော မြို့ပတ် ရထားလမ်းတည်ရှိ၊ အိမ်ခေါင်းရင်းဘက်တွင် လုံးချင်းတိုက်၊ Taxi စီးလိုက စီးပါ၊ ဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှ လမ်းမလျှောက်ချင်လျှင် ဆိုက်ကားစီး၊ လျှောက်နိုင်လျှင်လျှောက်၊ ရပ်ကွက်ပျံကျဈေးနှင့်နီး၊ ရထားလမ်းနှင့် ရေမြောင်း တောက်လျောက်၊ ရန်ကုန်စတိုင် အမှိုက်ပုံကခတ်ဟီးဟီး၊ စည်းကမ်းမရှိ အမှိုက်စွန့် တတ်သူများအဖို့ လွန်စွာမှ အဆင်ပြေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန်.ရှင်းလျှင် လေကောင်းရနိုင် သို့သော် ညစ်ပတ် သို့ရာတွင် ၅ လွှာ တွင်နေသဖြင့် ခြင်မရောက်တတ်၊ အိမ်တွင် မည်သည့်ပရိဘောဂ မှ မရှိသဖြင့် ကလေး ဟိုတက်ဒီတက်တက်ရန် မစိုးရိမ်ရ၊ မည်သည့် ဖျော်ဖြေရေးမှ မရှိသည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကလေး ဆက်စပ်မှုလည်း မရှိသဖြင့် တစ်လ အတွင်း တရုတ်ဘာသာစကားနှင့်တကွ အတူနေ အိမ်ဖော်ဘာသာစကား ဓလေ့/အကျင့်/စရိုက်များ ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်နိုင်ချေရှိ၊ ပိုက်လိုင်းထဲမှာ လာသော ရေမှာ သံဓာတ်အပြည့် ပါဝင်နေသည်ကို မြည်းစမ်းတွေ့ရှိရ၊ ရေသန့်ဗူး မှာယူ သောက်သုံးနိုင်ချေရှိ၊ အောက်ပါအချက်များ ကြိုတင်သိထားလျင် ကလေးအား သွားရောက်တွေ.ဆုံ နိုင်ပါသည် ( ဆိုလိုသည်မှာ အမြင့်ကြောက်တတ်သူများ၊ အမှောင်ကြောက်တတ်သူများ (လက်ရန်းမပါသော လှေခါးတလျှောက်) နှင့် အသန့်ကြိုက်တတ်သူများ အလည်အပတ် မလာသင့်) မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သတင်းသာဖြစ်ပြီး စာရေးသူ အာဘော် မပါဝင်ပါ။
သတင်းပို့သူ - သိုက်ဖွား
ဟိုပြင်ဒီပြင်လုပ် ကဗျာအုပ်စုထဲ ဆွဲထည့်သူ - ပန်ဒိုရာ
လမ်းပြမြေပုံပဲ ။ အစိုးရရဲ့ လမ်းပြမြေပုံလောက် မရှင်းဘူး။း)
နားလည်အောင်မနည်းဖတ်ရတယ်။ အိမ်ရောင်း ငှားကြော်ငြလိုလိုဘာလို......ပါကေးခင်းထားသည်. ရေချိုးခန်းကြွေပြားကပ် ဘိုထိုင်. တယ်လီဖံးပါသည်. အဲဒါတွေ တောင်ထပ်ထည့်လိုက်ရင် ဈေးကွက်ထဲထည့်လို့ရပြီ။
ရန်ကုန်မှာ ဘယ်က တရုတ်ဘာသာစကားတတ်သွားသလဲစဉ်းစားမရ. ရေသန်းဘူးမှာရတာတော့ ဒီလိုဘဲထင်ပါရဲ့။ ဘယ်ရပ်ကွက်လဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရရင်ပြေမယ်။
Kyauk Myaung ( Myo Part street)
၃ခေါက်ပြန်ဖတ်မိတယ်ကွယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကောက် လွဲမှာစိုးလို့ပါး)
မှောင်တာလည်း ကိစ္စမရှိဘူး ။ လှေကားမှာ လက်ရန်းမပါလဲရတယ်။ အိမ်ပေါ်ရောက်ရင် ရေတိုက်ရင်ရပြီ....း)
ဒီစာဖတ်ပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင် သွားစားနေကြ မုန့် ဟင်းခါးဆိုင်လေးသွားသတိရတယ်... နဘေးက အမှိုက်ပုံရယ် ရေမြောင်းရယ်... လေသင့်ရင် အနံ့ လေးပါရသေး... ခြင်ကြီးတွေက ကြွက်သားအဖုဖုတွေနဲ့ လို ထွားထွားကြီး... ခက်တာက မုန့် ဟင်းခါးရဲ့ဆွဲဆောင်မှု...